Na-alaghachi n'ime Osisi Na-abịa Blair Witch Project Documentary - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Na-alaghachi n'ime Osisi Na-abịa Blair Witch Project Akwụkwọ
Na-alaghachi n'ime Osisi Na-abịa Blair Witch Project Akwụkwọ
by admin February 17, 2015 772 echiche
Ma ị hụrụ ya n’anya, tụọ ụjọ ma ọ kpọrọ asị, enweghị ịgọnahụ nke ahụ Mmeghari Ahia Blair bụ otu n'ime ihe nkiri egwu kachasị emetụ n'ahụ na akụkọ ihe mere eme. N'ịbụ nke wepụtara na 1999, a na-akwụ ụgwọ ihe nkiri obere ego maka ịmalite ịmalite eserese eserese - na anyị na-agba gị ume ka ị ghara ịta ya ụta maka 10,001 copycats bịara na mbido ya!
Enwere obere ihe nkiri dị egwu nke na-atụ ndị mmadụ ụjọ n'ezie Mmeghari Ahia Blair, nke nwere ụdị ahịa ahịa dị mma nke na ọtụtụ kwenyesiri ike na ọ bụ ọrụ nke akụkọ na-abụghị akụkọ ifo. Ọ bụ ezie na anyị amatala eziokwu ahụ ugbu a, ọ ka na-atụ ụjọ dịka ọ dị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ ka e mesịrị.
Mgbe anyị n'eche Ihe oru Blair Witch 3, ọ dị ugbu a na ekpughere na akwụkwọ akụkọ banyere ihe nkiri mbụ ahụ na-abịa. Akpọrọ nke ọma Ọhịa Wood, atụmatụ ogologo doc ga - akpọrọ gị n'azụ ihe nkiri ihe ngosi akara ngosi, na - enye ohere a na - enwetụbeghị ụdị ya.
Nke a bụ nkwekọrịta gọọmentị:
N'ọnwa Ọktọba 1997, otu ndị na-eme ihe nkiri batara n'ọhịa Maryland iji mepụta ihe nkiri egwu na-adịghị ego nke onwe ha. AKWOKWỌ AKWITKWỌ AKW BKWỌ AKW wouldKWỌ ga-abụ ihe zuru ụwa ọnụ wee malite ụdị "achọtara" nke na-adịgide n'ike taa. Ugbu a, na nke mbụ ya, ị ga - ahụ etu esi emebi ndekọ ndekọ a. Site na mgbe a na-ahụtụbeghị mbụ nke nzukọ nzukọ tupu oge, akwụkwọ nyocha, na nyocha eserese na agbapụ agbapụ, nyocha nyocha mbụ, na ahịa na Ememme Nkiri nke Sundance, ndị ọrụ ọrụ niile na-eduzi gị site na mkparịta ụka na mkpebi ndị rụpụtara a ujo sensashion kpochapụwo.
Lelee ụgbọala na-adọkpụ maka doc dị n'okpuru, nke edobere ka ọ bụrụ nke a na-abịa n'August na FrightFest Glasgow.